Warar dheeraad ah oo ka soo baxayo Dadkii ay Kenya maanta ku xasuuqday degmada Jilib | KEYDMEDIA ONLINE
Warar dheeraad ah oo ka soo baxayo Dadkii ay Kenya maanta ku xasuuqday degmada Jilib
Kismaayo (Keydmedia) - Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaayo khasaaraka ka dhashay Duqeyntii Maanta Duhurkii ay Diyaaradaha Dagaalka Kenya ka geysteen gudaha degmada Jilib ee Gobbolka Jubbada Dhexe, sidaa horay u sheegnaynah khasaare soo gaaray dadka rayidka ah.
Tirada dhimashada ee dadka Rayidka ah ee ku geeriyooday Duqeynta ay Diyaaradaha Kenya ay ka fuliyeen Jilib waxaa ay hada cagacageeneysaa 10 qof dhaawacuna waa 12 qof, waxaana ay dadkaasi dhamaantood yihiin dad rayid ah.
Dadka ay Kenya xasuuqday waxaa ku jira 8 Caruur kuwaasoo uu dhalay Gudoomiyhii degmada Jilib xiligii Maamulkii Barre Hiiraale ee la oran jiray Dooxada Jubba, waxaa sidoo ka dadka geeriyooday ku jira Haween.
Dadka dhaawacmay ayaa waxaa dhaawacyadooda lool carray Isbitaalka deegaanka Mareerey ee isla gobbolka Jubbada Dhxexe, halkaasoo adeegyo iyo kaalmo caafimaad loogu fidinaayao, inkastoo xaalada caafimaad ee dadkaasi aad looga deyrinaayo.
Hadii aan sharaxaad kooban ka bixino sida ay duqeynta u dhacday, Diyaaradaha wax duqeeyay waxaa ay ka imaadeen dhanka Badda, waxaana inta aysan magaalad duqeynin ka horay ay ku dul wareegeen magaalada oo dhan, wax yar kadib dadka degmada Jilib waxaa ay ka war heleen Galtaalo tiro badan oo ay Diyaaraduhu soo gameen.
Tirada Gantaalada ay Jilib la dhaceen waa 10 Gantaal, waxaana ay Tobonkuwa ku dul dhaceen xaafado ay ku noolyihiin dad shacab ah.
Waa markii labaad oo ay dowladda Kenya ay dad rayid ah oo Soomaaliyeed ay ku xasuuqdo degmada Jilib., 30-bishii October ee sanadkii tagay ayay ahayd markii ay Diyaaradaha Kenya ay sidaan oo kale dad rayid ah ku laayeen degmada Jilib, dadka xiligaasi ay dileen waxaa ay dhanaayeen 15 qof waxaana ay dhaawaceen 60 qof oo kale oo dhamaantoodba rayid ahaa.